ခက်မာ: နွေးထွေးဆဲအတိတ် 1. 2.
(ကျမသူငယ်ချင်းစာရေးဆရာနီကိုရဲဆုံးတဲ့၂၀၀၉ဆောင်းဦးတညမှာသူ့ကိုလွမ်းတတဲ့စိတ်နဲ့ဒီစာစုလေးရေးဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ IDEAမဂ္ဂဇင်းမှာပါခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၂၀၁၁ရဲ့ဆောင်းတညမှာတော့ဘာကြောင့်မှန်းမသိ သူငယ်ချင်းကိုရဲ ကိုသတိရမိသွားတာကြောင့်ဟိုတုန်းကလက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့စာမူလေးကိုပြန်ကူးပြီး ဒီဘလော့ဂ်စာမျက်နှာ မှာအမှတ်တရသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။)
မေငြိမ်း၊ နီကိုရဲ၊ ခက်မာ
တိတ်ဆိတ်နေသောလမ်းကျဉ်းကလေးထဲတွင် ကျမတယောက်ထဲလမ်းလျှောက်သူရှိသည်။ လမ်းထဲရှိအိမ်များ
လက်ကျန်ပန်းတွေသာရှိတော့သည်။ သစ်ပင်တချို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ရွှေဝါရောင်အသွင်ပြောင်းစေခဲ့ပြီးတ ချို့တ၀က်ကရဲရဲနီစွေးနေပြီမို့ ပတ္တမြားကိုရွှေကွပ်ထားသလိုပင်။ မှင်တက်မိရလောက်အောင်လှသည့်ဆောင်း
ဦး၏နေခြည်ဝင်းပသည့်နေ့များကို ဒေသခံအမေရိကန်တွေက အမျိုးမျိုးတင်စားသုံးနှုန်းတတ်ကြသည်။ ကျမ ကတော့သစ်ရွက်များနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး ရွှေဝါရောင်၊ပတ္တမြားရောင်နေခြည်တွေပျံ့ကျဲကျနေသောလမ်းပေါ် မှာတိတ်ဆိတ်ကြေကွဲစွာ တယောက်ထဲလျှောက်နေမိသည်။
ဆောင်းဦးလေကလေးတချက်ဝှေ့လိုက်တော့ မြေကြီးပေါ်ကြွေကျပြီးသားသစ်ရွက်ခြောက်တွေက လေ စုန်ရာဖက်မှာရှိနေသော ကျမနောက်ကျောရှိရာပြေးလိုက်လာကြသည်။ နိုင်လွန်ကတ္တရာလမ်းနှင့်သစ်ရွက်
ကျမကတယောက်ထဲခပ်တိုးတိုးရေရွတ်မိသည်။ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိသိချည်းနှင့် ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်မှန်း လည်းသိပေမယ့် ခြေစုံရပ်ပြီးနောက်ဖက်ကိုလှည့်ကြည့်မိသည်။ ညိုဝါရောင်သစ်ရွက်ခြောက်တွေက ကျမကိုမီ လာပြီး ခြေထောက်ကိုထိနမ်းနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ကျမကိုယ်ကျမ,မသိပဲ ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်ခဲ့တာတွေရှိပေ
မယ့် တခါတလေကျတော့လည်း သိသိချည်းနှင့်ရူးကြောင်ကြောင်ခံစားပြီးရူးကြောင်ကြောင်ပြုမူနေထိုင်ပစ်
မနေ့ညကတည်းက ကျမအဲသည်လိုတွေဖြစ်နေခဲ့တာ။ လူတယောက်အကြောင်းတသီတတန်းကြီးစဉ်း
စားပြီး မျက်ရည်ဝေ့၀ိုင်းလျှက်က အသံထွက်အောင်ရယ်မိတာ ဒီတခါပဲရှိလိမ့်မည်ထင်သည်။
မနေ့ညကအိပ်ရာထဲရောက်ပြီးမှ ဘယ်လိုမှကြိုးစားအိပ်လို့မရတာနှင့် အိပ်ရာထဲမှထပြီး အီးမေးလ်ကို
ဖွင့်မိသည်။ Gmail စာမျက်နှာပေါ်ရှိ ကျမနံမည်ဘေးမှ အချက်ပြမီးစိမ်းလေးပေါ်လာပြီးမရှေးမနှောင်းပင် 'တုံ'
ကနဲအသံလေးကြားရပြီး Chat Box လေးတခုပွင့်လာသည်။ မနော်ဟရီက' မခက်' ဟုလှမ်းခေါ်၏။ ကျမက နှုတ်ဆက်စကားပြန်ဖို့စာရိုက်နေတုန်း နောက်ထပ်စာတကြောင်းပေါ်လာသည်။
ကိုရဲ..။ ကျမသိသောကိုရဲတွေက နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိသည်။ ကျမကခေါင်းထဲပထမဦးဆုံးရောက်
လာသောနံမည်ကိုရိုက်ပြီး Enter နှိပ်လိုက်သည်။
“ သစ္စာနီလား“ ( တောင်းပန်ပါတယ် ဆရာသစ္စာနီ)
မနော်နှင့်စကားပြောပြီးနောက် ကွန်ပျူတာကိုပိတ်လိုက်ပြီးပေမယ့် ဘယ်လိုမှအိပ်လို့ပျော်မှာမဟုတ်ကြောင်း သိနေသည်။ ဒါကြောင့်အိပ်ရာထဲမ၀င်သေးပဲ စာကြည့်စားပွဲဘေးမှကုလားထိုင်ပေါ်မှာပဲဆက်ထိုင်နေမိသည်။
စာကြည့်မီးကိုပိတ်လိုက်ပြီး ပြတင်းပေါက်တရုတ်ကပ်တွေကိုဖွင့်လိုက်သည်။ အပြင်မှာတော့ ဆောင်းသစ်ရွက်
သူနှင့်ကျမဘယ်အချိန်မှာစတင်ခင်မင်ခဲ့ကြသလဲ ကျမမမှတ်မိတော့ပါ။ ကျမခေါင်းထဲပထမဆုံးရောက်
လာတာကတော့သင်္ကန်းကျွန်းကဦးထက်မြက်၏ဘာသာပြန်သင်တန်းလေးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၃ ပတ်ဝန်း ကျင်လောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျမတို့သူငယ်ချင်းတတွေဝိုင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့် ဦးထက်မြက်က ကျမတို့
သူငယ်ချင်းအုပ်စုလေးအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလေးတခုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ဝတ္တုတပုဒ်ကိုဘာသာ ပြန်ပြရင်း သိသင့်သောသဒ္ဒါတွေ၊ စကားလုံးတွေ၊ အသုံးအနှုန်းတွေကိုပြောပြသွားသည်။ ထိုသင်တန်းကလေး ကိုအကြောင်းပြု၍ ကျမတို့ မကြာခဏတွေ့ကြသည်။ ကျမသူငယ်ချင်းဖြစ်သောနီကိုရဲက သင်္ကန်းကျွန်းသားမို့
ကျမနှင့်အလွန်ခင်သော သင်္ကန်းကျွန်းသားသူငယ်ချင်းတွေနှင့်လည်းသူကသိနေသည်။ အဲဒီလိုဟိုဖက်ဒီဖက် တွေပတ်သက်ပြီး ကျမတို့အုပ်စုအတွက်သီးသန့်သင်ပေးသော အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွင် နီကိုရဲပါလာခြင်းဖြစ် သည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျမကစာရေးသက် သုံးနှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီ။ နီကိုရဲကလည်းစာတွေရေးနေ ပြီ။ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာသူ့ကဗျာလေးတွေ၊ ၀တ္တုလေးတွေကြိုးကြားပါနေချိန်ပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်းကျမတို့သင်တန်း လေးက စာသင်တာနှစ်နာရီဆိုလျှင် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီးလေပန်းကြတာက နှစ်နာရီထက်ပိုသည်ပေါ့။
ထိုစကားဝိုင်းတွေမှာကျမကကိုရဲဟုခေါ်သောနီကိုရဲကဆေးပေါ့လိပ်ကိုထောင်းထောင်းထအောင်ဖွာရင်း မျက် လုံးအပြူးသားနှင့်ကျမတို့ပြောသမျှစိတ်ဝင်တစားနားထောင်တတ်သည်။သူများစကားပြောနေတာကိုသူဘယ် တော့မှဖြတ်မပြောပါ။ သူပြောရမည့်အလှည့်ရောက်လာပြီဆိုလျှင်တော့ ဖွဲ့ကာနွဲ့ကာ၊ သိုင်းကာဝိုင်းကာနှင့် စိတ် ၀င်စားဖွယ်ကောင်းအောင်ပြောတော့သည်။
၁၉၉၄ မှာ ကျမနှင့် ရာသက်ပန်(တောင်ငူဆောင်) နှစ်ယောက်ပေါင်း၍ခြောက်မိုင်ခွဲ၊ ဓမ္မာရုံလမ်းထဲမှာ အဆောင်ခန်းလေးတခန်းငှားနေကြသည်။ ခြောက်မိုင်ခွဲရောက်သွားသဖြင့် သင်္ကန်းကျွန်းသားနီကိုရဲနှင့်ဝေး
သွားပြီထင်ခဲ့တာ တကယ်တော့အနီးဆုံးကိုရောက်လာခြင်းပင်။ သူ့သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာမင်းဝေမော်က
ကျမတို့အဆောင်နှင့်မျက်စောင်းထိုးမှာ အခန်းငှားနေသည်။ နီကိုရဲက ကိုမင်းဝေမော်နှင့်အတူလာနေသည်။ ကျမတို့အဆောင်သစ်ကိုစရောက်စနေ့မှာပဲ ကိုရဲနှင့်လမ်းပေါ်မှာပက်ပင်းတိုးတော့ အံ့သြ၀မ်းသာစွာစကား
“ ခင်ဗျားနဲ့ကနော်က ရေစက်ပါတယ်ဒေါ်ခက်မာရဲ့။ အဲဒါကိုငြင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့။“
ကျမကပြုံးတုံ့တုံ့နှင့်စကားပြန်တော့သူကတဟားဟားရယ်ခဲ့သည်။ ကျမမှတ်မိသလောက်ကျမတို့ခင်မင် စမှာသူကကျမကို မခက်မာဟုခေါ်သည်။ နည်းနည်းပိုရင်းနှီးလာတော့ခက်မာဖြစ်လာသည်။သင်တန်းအတူတူ တက်ရင်း သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်း တော်တော်သိလာချိန်မှာတော့သူက ကျမသူငယ်ချင်းတွေကျမကို ခေါ်သလို မို့မို့ဟုလိုက်ခေါ်သေးသည်။ ကျမကစကားပြောလျှင် ကျမနံမည်အရင်းမှနောက်ဆုံးစာလုံးကိုအဖျား ဆွတ်ပြီး ' မို့' ဟုပြောတတ်လေတော့ နောက်ပိုင်းမှာသူကလည်း ကျမကို ' မို့ ' ဟုပဲခေါ်တော့သည်။
အဆောင်မှာနေစဉ်ကာလတလျှောက် ကျမတို့ တနေ့ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခါတွေ့ဖြစ်သည်။နေ့လည်ထမင်း စားချိန်ဆို သူတို့နှစ်ယောက် သူတိူ့အဆောင်မှထွက်လာပြီး ကျမတို့အဆောင်ရှေ့မှာရပ်သည်။
ကျမနှင့်ရာသက်ပန်က အဆောင်မှာထမင်းချက်မစားဖြစ်သည့်နေ့တွေဆိုသူတို့နှင့်အတူအဆောင်နား က “ ရွှေကြယ်“ မှာ ထမင်းလိုက်စားသည်။ ညနေ ၅နာရီ၊ ခြောက်နာရီလောက်တခါ သူတို့ ကျမတို့အခန်းရှေ့ ရပ်ကြပြန်သည်။
များသောအားဖြင့်တော့ ကျမတို့ သူတို့နှင့်အတူနေ့လည်စာမစားဖြစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ညကိုးနာရီဝန်းကျင် လောက်ဆိုလျှင်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်အတူ “ရွှေကြယ်“ မှာ လက်ဘက်ရည်ထွက်သောက်မြဲ။ ညလည် စာအဖြစ် လက်ဖက်ထမင်းဖြစ်စေ၊ မြေပဲထမင်းဖြစ်စေ၊ ထမင်းသုတ်ဖြစ်စေစားကြမြဲ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကနေ့ တိုင်းတွေ့နေရပြီး ကျမတို့မှာစကားပြောစရာတွေကုန်မသွားခဲ့တာကို အခုအချိန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ငါတို့
ရွှေကြယ်မှာနေ့လည်ဖက်ထိုင်သည့်တရက် ကျမမမြင်ဖူးသော ကိုရဲ၏သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုရဲနှင့်
အတူပါလာသည်။ ကိုရဲကမိတ်ဆက်ပေးတော့ ကျမကိုဝတ္တုတိုတွေရေးသူတယောက်အဖြစ်သိထားသော ထို
“ခင်ဗျားက ၀တ္တုတိုတွေရေးတဲ့သူဆိုတော့ မေးရဦးမယ်။ ကျော်အောင်ဘာသာပြန်တဲ့ ' ၀တ္တုတို' ဆိုတဲ့
“ ကျမတခေါက်တော့ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်တခေါက်တော့ထပ်ဖတ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ပါ ဘူး“
သူ့သူငယ်ချင်းက ဒါဆိုလဲပြီးတာပါပဲဗျာဟုပြောကာ တခြားအကြောင်းအရာတွေဖက်စကားဦးပြောင်း သွားပြီး ထုံးစံအတိုင်းညဆယ်နာရီထိုးမှ လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။
ကျမတို့အဆောင်ရောက်ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲ၊ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်ပြီးအိပ်ဖို့ပြင်နေစဉ် အခန်းတံခါးခေါက်သံကြားရသည်။ ဖွင့်ကြညည့်လိုက်တော့ နီကိုရဲ။
“ ခင်ဗျားကို ကျနော်တောင်းပန်ချင်လို့ဗျ “
ကျမကသူ့ကို တံခါးပေါက်ဝနားက ကုလားထိုင်မှာထိုင်ခိုင်းပြီး တအံ့အသြမေးမိသည်။
“ ဘာကိုတောင်းပန်မှာတုန်း ကိုရဲရဲ့၊ တောင်းပန်စရာလဲဘာမှမရှိပဲနဲ့။“
“ ခုနကလက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ကျနော့်သူငယ်ချင်းက ခင်ဗျားကို ' ၀တ္တုတို' စာအုပ်အကြောင်းပြောရင်း ခင်ဗျားမှာမရှိရင်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုတောင်းပန်ချင်လို့။“
“ ဘုရားရေ... အဲဒါတောင်းပန်စရာလား။“
“ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါတောင်းပန်ရမယ်..“
“ သြော်..ကိုရဲရယ်။ သူကလည်း မို့ကိုဝတ္တုတိုရေးတဲ့သူမှန်းသိလို့စေတနာနဲ့ပြောတာပဲ။ တကယ်ဆိုသူ ပေးမယ်ဆိုတာကို ငြင်းလိုက်မိတဲ့သူကတောင် တောင်းပန်သင့်သေးတာ။ အဲဒီစာအုပ်ထဲကအချက်အလက် တွေအတိုင်းလိုက်နာသည်ဖြစ်စေ၊မလိုက်နာသည်ဖြစ်စေ ၀တ္တုတိုရေးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ အဲဒီလိုစာအုပ် မျိုး တော့ရှိထားသင့်တာပေါ့။“
သူက ထုံးစံအတိုင်း မျက်လုံးအပြူးသားနှင့် ကျမကိုငူငူကြီးစိုက်ကြည့်နေလေသည်။ ပြီးတော့ ဖြတ်ကနဲ
“ မသိဘူးဗျာ။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ အဲဒီကိစ္စတောင်းပန်သင့်တယ်ထင်လို့လာတောင်းပန်တာပဲ။ မဟုတ်
ရင်ကျနော် အိပ်လို့ပျော်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခုတော့တောင်းပန်ပြီးပြီ။ ပြန်အိပ်တော့မယ်။“
မမိုချာ့နှင့် မိုးချိုသင်းတို့က ဒန့်ဒလွန်သီးလက်များဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသော သူ၏လက်သည်းရှိရာ နှင့်လက်ဆစ်နေရာတွေမှာ ဖောင်းကားနေပြီး လက်ချောင်းနေရာတွေကသေးနေသောလက်များကို မှောက် ချည်လှန်ခြည်ပြု၍ မာန်နှင့်ဟန်နှင့်ပြောရင်းသူထွက်သွားသည်။ စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်နှင့် ပုဆိုးဟောင်းခပ်နွမ်း
နွမ်းတထည်ကိုကပိုကရိုဝတ်ထားသောသူ့နောက်ကျောပြင်ကိုကြည့်ကာ ပြာကလောင်၊ပြာလချောင်ကိုသတိ ရသွားတာရော၊ ဘာကိုမှန်းမသိအူကြောင်ကြောင်လာတောင်းပန်သွားတာကိုရောစဉ်းစားမိသွားကာညလည် ခေါင်မှာ အတော်ကျယ်အောင်ပင်ကျမရယ်မိခဲ့သည်။ သူကအဲဒီအချိန်ကတည်းကကျမကို အရူးလိုတယောက် ထဲရယ်နေတတ်အောင်လုပ်ခဲ့သူပေပဲ။
၁၉၉၅ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျမဓမ္မာရုံလမ်းအဆောင်မှပြောင်းခဲ့သည်။ ဒီတခါလည်းကိုရဲနှင့် အနေဝေးရ
ပြန်ပြီဟုထင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ထိုအထင်မမှန်ပြန်ပါ။ သူနှင့်ကျမက သူပြောသလိုပဲ ရေစက်ပါကြသည်။
မြန်မာစာကျူရှင်ဖွင့်သည်။ ကျမကထိုကျူရှင်မှာ မန်နေဂျာမှသည် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သားအထိအကုန်အကျုံး
၀င်သောရာထူးတခုဖြင့် အလုပ်ဝင်သည်။ ကျမအလုပ်စဆင်းသောနေ့မှာပဲ ရန်ကုန်မြို့လည် ၃၄ လမ်း၏သုံး ထပ်မှာရှိသော ကျမအလုပ်လုပ်ရာကျူရှင်ခန်းသို့ ကိုရဲရောက်လာသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ရှပ်အကျီအဖြူပွပွနှင့်
ပုဆိုးကိုတိုတိုဝတ်လျှက်။ ထုံးစံအတိုင်း ထုံးထားသောလွယ်အိတ်ကိုလွယ်၍ ဆေးပေါ့လိပ်ကိုလက်ကြားညှပ် လျှက်။
“ ဟောတော်.. ကိုရဲကဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ..“
“ ဟင်.. ခင်ဗျားက ဒီကိုဘာလို့ရောက်နေတာလဲ“
ပြိုင်တူမေးမိသောမေးခွန်းနှစ်ခုအဆုံးမှာ ကျမတို့ရယ်ရှိန်ကိုတော်တော်နှင့်မသတ်နိုင်ခဲ့ကြပေ။ တကယ် ကကျမဒီမှာရှိမှန်းသိလို့သူလာတာမဟုတ်။ ကိုမျိုးဆွေသန်းက သူ့သူငယ်ချင်းမို့လာတာ။ ဒီတော့သူကပြောလို့
“ ဒီမှာ.. ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော် ရေစက်ပါတယ်ဆိုတာယုံပြီလား“
“ ယုံပါတယ်၊ ယုံပါတယ်“
တကယ်ပဲ သူနှင့်ကျမ အဲဒီကာလတွေမှာပိုနီးသွားကြတာ။ ကျူရှင်ခန်းမှာ ကျမရယ်။ နောက်ထပ်ဝန် ထမ်းတယောက်ဖြစ်သည့် တေးရေးကေအေတီ၏ ညီမ၀မ်းကွဲကလေး သက်ထားကျော်ရယ်၊ ကိုမျိုးဆွေသန်း
၏ညီကျော်ဇံလှရယ်နေ့တိုင်းရှိသည်။ ကျော်ဇံလှကထမင်းပေါင်းအိုးလေးတလုံးယူလာ တော့ကျမတို့အခန်းမှာ ပဲထမင်းချက်စားကြသည်။ မုန့်ဟင်းခါး၊ အသုတ်စုံ၊ ဘူးသီးကြော်စတာတွေက ကျမတို့အတွက်ဟင်းလျှာတွေ။ နေ့လည်၁၁နာရီ၁၂နာရီလောက်ဆို ဘုထုံးနှင့်လွယ်အိတ်ကိုလွယ်လျှက်နီကိုရဲရောက်လာပြီ။ မုန့်ဟင်းခါးနှစ်ပွဲ နှင့်ဖြစ်စေ၊ဘူးသီးကျော်သုတ်နှစ်ပွဲနှင့်ဖြစ်စေကျမတို့လေးယောက်ထမင်းမြိန်ခဲ့ကြသည်။တခါတရံ ကျောင်းဆ ရာမျိုးဆွေသန်းပါ ကျမတို့ထမင်းဝိုင်းထဲပါသည်။ ထမင်းပါမကအပျော်တွေ၊ အရယ်တွေ၊ဟာသ ပျက်လုံးတွေ၊ ပေါက်တတ်ကရစကားတွေနေ့စဉ်စားခဲ့ကြသည်။ အမှတ်တရပျော်စရာရက်များပေါ့။
“ မို့ကြွေးတာချည်းပဲ နေ့တိုင်းစားနေရတာအားနာတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့တော့ ခင်ဗျားကိုကျနော်မုန့်ဟင်းခါး
“ ဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးကိုရဲ။ ထမင်းချက်တာနဲ့ ကိုရဲအတွက်ထည့်ချက်ပြီးသား။ ကိုရဲပေါ်မလာရင် သာ မရယ်ရလို့ ပျင်းနေကြတာ။“
တကယ်ပဲ ညီမလေးသက်ထားကျော်က နီကိုရဲအလာလျှင် ဟိုအကိုကြီး ဒီနေ့မလာဘူးဟု တ,နေကျ။
“ မို့ကချည်းပဲ ကြွေးနေရလို့လိုက်စားတယ်မထင်နဲ့နော်။ တကယ်မုန့်ဟင်းခါးစားချင်နေလို့။ လာ..သွား
ကျမတို့ကျူရှင်ရှိရာ ၃၄ လမ်းထိပ်က မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာစားကြ၏။ ကျမကမုန့်ဟင်းခါးထဲငရုတ်သီးတွေ ရဲနေအောင်ထည့်၊ ပဲသီးတွေ၊ သံပုရာရည်တွေပါထည့်တော့ သူကမျက်လုံးဝေ့ကြည့်သည်။
“ ခင်ဗျားစားတာ မြိန်စရာကြီးဗျာ။ ကျနော်လည်းအဲဒီလိုစားကြည့်ဦးမယ်။“
တကယ်တော့ စားနေကျမဟုတ်သောကြောင့်သူမခံနိုင်ပါ။ရွေးစေ့လောက်ရှိသောချွေးတွေတတောက် တောက်ကျ၊ နှာရည်တွေ မျက်ရည်တွေထွက်။ ကျမကသူ့ကိုကြည့်ပြီးရယ်တော့ သူကမျက်လုံးထဲစီးဝင်လာ
သောချွေးတွေကို ခေါင်းယမ်း၍ဖယ်ရှားရင်း၊ မျက်တောင်တဖြတ်ဖြတ်ခပ်ရင်း၊ပါးစပ်ထဲလေတွေရှူသွင်းရင်း လိုက်ရယ်သည်။
“မို့ကိုမုန့်ဟင်းခါးကြွေးရတာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ နေ့တိုင်းမကြွေးနိုင်တာကိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။“
“ နေ့တိုင်းကြွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့ ကိုရဲရယ်။“
သူကသူ့ထုံးစံအတိုင်း မျက်လုံးအပြူးသားနှင့် တနေရာကိုခပ်တွေတွေစိုက်ကြည့်ရင်း ' ဟုတ်တယ်.. နေ့ တိုင်းကြွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်' ဟု ကျမကိုမကြည့်ပဲပြောသည်။
အဲဒီကာလတွေမှာကတည်းက သူကအတော်စာရေးနိုင်သောလူငယ်လေးပင်။ သုံးလေးရက်ကြာလျှင် ၀တ္တုတိုအသစ်တပုဒ်သူရေးနိုင်ခဲ့ပြန်ပြီ။ ရေးပြီးတိုင်းလည်း ' ဖတ်ပေးဦးဗျာ' ဟုဆိုကာကျမလက်ထဲထိုးထည့် တတ်သည်။ အဲဒီတုန်းက သူကအတည်အခန့်တွေပဲရေးတာ။ သူ့အရေးအသားက အင်မတန်ပြေပြစ်ချောမွေ့
သည်။ တကယ့်ကိုစာရေးကောင်းသည့်နီကိုရဲ။ တနေ့မှာ သူကျမကိုပေးဖတ်လာတာက စာပေနှင့်နီးစပ်သည့်
အနုပညာဆန်သော မိန်းမငယ်လေးတယောက်အကြောင်းကို ထိုမိန်းကလေးနေရာမှရေးဖွဲ့ထားသည့်ဝတ္တု ရှည်တပုဒ်ဖြစ်သည်။ သူ့အရေးအသားကဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုလျှင် စာဖတ်နေရင်းထိုဇာတ်ကောင် မိန်းကလေးကိုမျက်စိထဲမြင်လာသယောင်ခံစားရသည်။ မိန်းကလေးတယောက်၏အတွေး၊ မိန်းကလေးတ
ကျမဖတ်ပြီးသွားတော့ ထုံးစံမေးခွန်းကိုသူမေးသည်။ ကျမကစာမူထပ်ကြီးကိုရင်ခွင်မှာပိုက်ပြီး သူ့ကို
“ ကိုရဲ..။ ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လား“
“ ဘာကိုလဲ..“ သူကဇဝေဇ၀ါပြန်မေးသည်။
“ မိန်းကလေးတယောက်အကြောင်း ဒီလောက်အသေးစိတ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖွဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ ကိုရဲက
“ ဟာ... ဗျာ..“
ကျမစကားကိုကြားတော့ သူကဖနောင့်တချက်ဆောင့်ရင်း မျက်နှာကိုမော့ကာ အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ၏မလှပသော လက်ညှိုးကိုထောင်၍ ဟိုဖက်သည်ဖက်ရမ်းကာပြောသည်။
ကျမတို့ကျူရှင်ခန်းက မြို့လည်ခေါင် ၃၄ လမ်းမှာဆိုတော့ ကျောင်းဆရာ( မျိုးဆွေသန်း) နှင့်ရော ကျမ နှင့်ပါပတ်သက်ခင်မင်သည့် စာရေးဆရာမိတ်ဆွေတွေ၊ ကျောင်းဆရာကိုဒီဇိုင်းအပ်ချင်သည့် ဂီတနယ်မှမိတ် ဆွေတွေအမြဲလိုလိုလာသည်။စာသင်ချိန်မရှိသောရက်တွေမှာအခန်းမှာကျမရယ်၊သက်ထားကျော်ရယ် နီကိုရဲ
ရယ်သုံးယောက်သာရှိတာများသည်။ ကျမတို့နှစ်ယောက်စကားဝိုင်းက သိပ်စာပေဆန်လာလျှင်သက်ထား
ကျော်ကပျင်းလာပြီး မီးဖိုခန်းရှိကွပ်ပျစ်မှာသွားအိပ်တော့သည်။ အခန်းကိုတက်လာသည့် ဧည့်သည်များစွာက
ကျမနှင့်ကိုရဲနှစ်ယောက်သား ခေါင်းချင်းဆိုင်တွတ်ထိုးနေတာနှင့်ဆုံဖူးသည်။ တနေ့တော့ သူ့ကိုစချင်သဖြင့်
“ ဧည့်သည်တွေလာရင် မို့တို့နှစ်ယောက်ကို ဒီအခန်းကျယ်ကြီးထဲမှာ နှစ်ယောက်ထဲစကားပြောနေတာ မြင်ကြတော့ သူတို့ဘယ်လိုထင်ကြမလဲမသိဘူးနော်။“
“ ဒီမှာ ဒေါ်ခက်မာ.. ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော့်ကို ဘယ်သူမှ ဘာဘာညာညာမထင်ဘူး။ အဲဒါတော့စိတ်ချ“
“ ဘာလို့မထင်ရမှာလဲကိုူရဲရဲ့။ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပဲ။ ပြီးတော့ရွယ်တူလူလွတ်တွေ။“
“ ဟာဗျာ.. ဘယ်သူမှမထင်ပါဘူး“
“ ခင်ဗျားက ရှည်ရှည်မျောမျောထွားထွားကျိုင်းကျိုင်း။ ကျုပ်ကပုပုသေးသေးပိန်ပိန်လှီလှီ။ ဘယ်သူက သမီးရည်းစားလို့ထင်မလဲ“
“ ဟာ.. ရှည်တာပုတာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ“
“ မသိဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားနဲ့ကျနော်က သူများအထင်လွဲရမယ့်လူနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော် တို့နှစ်ယောက်ကို ဘယ်သူမှအထင်လွဲမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပဲ..“
နောက်ဆုံးတော့ ညကြီးသန်းကောင် အခန်းတံခါးလာခေါက်ပြီး တောင်းပန်တုန်းကလို 'မသိဘူးဗျာ' နှင့်
သူ့စကားကိုအဆုံးသတ်တော့မှ ကျမကအားပါးတရရယ်ချလိုက်သည်။ နောက်နေတာမှန်းသိသိကြီးနှင့် သူက
အားတုန့်အားနာဟန်ပေါက်နေကာ'ခင်ဗျားတော်တော်ဆိုးတာပဲ'ဟုပြော၍ ဆေးပေါ့လိပ်ကိုသာဖိဖွာနေခဲ့လေ သည်။
သိပ်မကြာခင်ကာလအတွင်းမှာပင် သူကတရှိန်ထိုးနှင့် နံမည်ကျော်ကြားသောစာရေးဆရာဖြစ်လာ တော့သည်။ နံမည်ကျော်မယ့်ကျော်တော့ဟာသနှင့်။ သူ၏ကြည်ပြာရောင်နက္ကတစ်များကအတော်အောင်မြင် ခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းအရာတွေကိုဝတ္တုအဖြစ်မဖတ်ရခင်ထဲက ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှင့်မကြာခဏကြား
ဖူးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ၀တ္တုအဖြစ်ချရေးတော့လည်း သူ့အရေးအသားပြောင်မြောက်မှုကြောင့် သိပြီးသားဇာတ်
လမ်းတွေကိုပင်အသံထွက်အောင်ရယ်မောမိ၍ အသစ်လိုခံစားရစေသည်။ အတည်အခန့်တွေရေးတုန်းကနုနွဲ့ လှပခဲ့သလို အလွန်ရေးရခက်သောဟာသစာတွေကိုလည်း သူကနိုင်နိုင်နင်းနင်းရေးနိုင်ခဲ့ပြန်သည်။ သူ့ဝတ္တု
တွေကရယ်ရပေမယ့်ကလိထိုးရယ်ရသောအရေးအသားတွေမဟုတ်ပါ။ဘ၀ကလည်းနာပြီးသား၊အရေးအသား ကလည်းနိုင်နင်းပြီးသားမို့ န့စဉ်ဘ၀ထဲကအမောတွေကမောက်ကမဖြစ်မှုတွေကို သူကဟာသအမြင်နှင့်ကြည့် နိုင်ရေးနိုင်ခဲ့သည်။
သူကသူ့ဝတ္တုတွေထဲမှာ သူ့ဘ၀ကိုဖုံးကွယ်ဖို့မကြိုးစားခဲ့။ သူတို့မိသားစု၏ချို့တဲ့ခဲ့သောရက်များ၊ လူ
ကောင်ပုပုသေးသေးနှင့်မိန်းကလေးအကြိုက်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ခဲ့သောသူ့ဘ၀များကို စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာမကြာ ခဏဖတ်ရသည်။ တရက်မှာတော့ သူမကြာခဏထုတ်ပြောလေ့ရှိသော သူလူကောင်သေးခြင်းကြောင့်ကြုံရ သည့်ဟာသများနှင့်ဆက်စပ်ကာ ကျမကမေးမိသည်။
“ ကိုရဲ အဖေအမေတွေက ပုလို့လား။“
“ အမေကတော့ ခပ်ပုပုပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အဖေကအရပ်ရှည်တယ်။ ကျနော့်ညီဆိုရင်လည်းအရပ် ရှည်တယ်။“
“ ဒါဖြင့် ကိုရဲကအမေတူတာပေါ့။“
“ အမေနဲ့တူတာလည်းပါတော့ပါတာပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ကျနော့်အဖေနဲ့ အမေကဆွေမျိုးမကင်းဘူးတဲ့ဗျ။“
ဆွေမျိုးနီးစပ်တွေအိမ်ထောင်ပြုလျှင် မျိုးရိုးဗီဇအရဘာဖြစ်သည်ဆိုလား ရင်သွေးမှာတစုံတခုထိခိုက်တတ်
“ ဒါ့အပြင် အဖေနဲ့အမေရဲ့အိမ်ထောင်ဦးရက်တွေမှာဧည့်သည်တွေအိမ်မှာညအိပ်ညနေလာတည်းတာ
“ ကျနော်တို့အိမ်လေးက ကျဉ်းလဲကျဉ်းတယ်လေဗျာ။“
“ ကိုရဲကလည်း.. အိမ်ကျဉ်းတာနဲ့ လူကောင်သေးတာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။“
သူကသူ့ဘာသာတဟီးဟီးရယ်ရင်း ကျမအတွေးပေါက်လာနိုးစောင့်သည်။ ကျမမျက်မှောင်ကြုံ့ထားတာ မပြေလေတော့ သူကအရယ်ရပ်ပြီးအားမလိုအားမရပြော၏။
“ မို့ကလည်းဗျာ.. စာရေးဆရာမလုပ်နေပြီး..“
“ ဟာ.. စာရေးဆရာမဖြစ်တာနဲ့ လူကောင်သေးတဲ့အကြောင်းမသိတာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။“
သူကမျက်နှာကိုမော့ကာ အားရပါးရအော်ရယ်တော့သည်။ ကျမလည်းသူရယ်နေတာကိုကြည့်ကာရယ် ချင်လာပြီး သူနှင့်အတူရောရယ်မိသည်။ သူကရယ်ရှိန်ကိုခက်ခက်ခဲခဲသပ်၍ ဖောင်းကားသောလက်သည်းနှင့်
“ တော်ပြီ။ လူကောင်သေးတဲ့အကြောင်း ဒီမှာတင်ရပ်“
အဖြေမရသဖြင့် ကျမကမကျေမနပ်ရေရွတ်တော့ သူကတဟီးဟီးရယ်ပြန်သည်။ စကားဆက်နေလျှင် အရယ်စခန်းက ဆုံးတော့မှာမဟုတ်သဖြင့် ကျမလည်းစကားမဆက်တော့ပါ။
နောက်ပိုင်းကျမကျူရှင်မှာအလုပ်ဆက်မလုပ်တော့ပေမယ့် သူနှင့်လေထန်ကုန်းမှာမကြာခဏဆုံသည်။ သည်တော့လည်း လေထန်ကုန်း၏နောက်ဆုံးသိမ်းရသောစားပွဲက ကျမတို့စားပွဲဖြစ်တော့သည်ပေါ့။ ၁၉၉၆
နှောင်းပိုင်းတရက်မှာတော့ သူနှင့်လေထန်ကုန်းမှာဆုံတုန်း ကျမကသတင်းတခုပြောသည်။
“ မို့အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ကိုရဲ။ နိုဝင်ဘာလထဲမှာ မင်္ဂလာဆွမ်းကြွေးပွဲလုပ်မယ်။“
သူကမျက်လုံးကြောင်တောင်နှင့်ကြည့်နေသည်။ ကျမကသူ့လက်ထဲမင်္ဂလာဖိတ်စာထည့်ပေးထားပြီး ပြီမို့ သူဖွင့်ဖတ်နေစဉ်စကားဆက်လိုက်သည်။
“ သေသေချာချာမှတ်ထားနော်။ မို့ရဲ့မင်္ဂလာဆွမ်းကြွေးပွဲမှာ ကိုရဲကဧည့်ခံကြိုဆိုရေးကော်မီတီဥက္ကဌ“
“ ဟားဟား.. ရာထူးကိုတော့ကြိုက်သွားပြီဗျာ“
ဒါပေမယ့် ကျမမင်္ဂလာပွဲကိုသူရောက်မလာပါ။ ကျမဘ၀၏ရက်ပေါင်းတော်တော်များများမှာ ကျမနံဘေး တွင်ရှိနေခဲ့သောသူက ကျမမင်္ဂလာဆောင်ကိုရောက်မလာတော့ ကိုရဲလဲမလာဘူးဟုမကြေမနပ်ရေရွတ်မိပေ မယ့်သူ့ကိုကျမအပြစ်မတင်မိပါ။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနှစ်လခန့်ကြာပြီးသည့်တရက်မြို့ထဲမှာသူနှင့်ဆုံတော့သူနှင့် တွေ့လျှင်စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာနောက်ပြောင်ချင်တတ်သောကျမက နောက်လိုက်မိပြန်သည်။
“ ကိုရဲက မို့မင်္ဂလာဆောင်မှာ လူတွေကြားမျက်ရည်ကျမိမှာစိုးလို့မလာတာမဟုတ်လား“
သူ၏တဟားဟားရယ်သံကိုပြန်ကြားရသည်။ ထောင်ထားသောလက်ညှိုးလေးဘယ်ညာရမ်းတာကိုမြင် ရပြန်သည်။ အရယ်တ၀က်နှင့်ပြောသောသူ့စကားသံကိုကြားရပြန်သည်။
“ မို့နော်မို့..။ ခင်ဗျားကတော့...တကယ်ပဲ“
တကယ်တန်းကျမတို့အနေဝေးသွားတာက သူ၏ရွှေရောင်ရက်တွေမှာဖြစ်သည်။ ကျမကယောက္ခမ
များရှိရာ သံလျှင်မြို့ကခြံကျယ်ကြီးတခုတွင် သားငယ်ငယ်လေးကိုထိမ်းကျောင်းရင်း စာပေလောကနှင့်ခေတ္တ
အလှမ်းကွာနေချိန်မှာ သူ့အောင်မြင်မှုတွေကအရှိန်အဟုန်ကောင်းလာခဲ့သည်။ ၀တ္တုတွေအဆက်မပြတ်ရေး၊ သူ့ဝတ္တုတွေရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ရောင်းရ၊ သူဒါရိုက်တာလုပ်၊ သူအိမ်ထောင်ကျ။ လက်စားခြေတာမဟုတ်ပေမယ့် သူ့ မင်္ဂလာဆောင်ကိုကျမမသွားဖြစ်ပါ။ ထိုကာလအတွင်း လေးငါးနှစ်လောက်ကျမတို့ အဆက်ပြတ်သွားခဲ့သည်။
၂၀၀၁ခုနှစ်မှာ သံလျှင်မှပြောင်းပြီး ရန်ကုန်သာကေတမှာအိမ်ငှားပြီးနေကြတော့ သူနှင့်ကျမပြန်နီးသွား ပြန်သည်။ ကျမတို့ ဖုန်းဆက်ချိန်း၍လေထန်ကုန်းမှာဆုံကြသည်။ သူနေသောသင်္ကန်းကျွန်းနှင့် ကျမနေသော သာကေတက အနီးကလေးဆိုတော့ သူ့အိမ်ကိုလည်းမကြာခဏရောက်သည်။ ချစ်စဖွယ်ရိုးသားသောသူ့ဇနီး
သည်နှင့်လည်းခင်မင်ရင်းနှီးသွားကာ သူတို့အိမ်ရောက်တိုင်း သူတို့သားကလေးတော်ကီမန်း( Talky Man)၏
ကြွေးတတ်သည်။ အကောင်းစားဆိုင်ကြီးတွေမဟုတ်သော်လည်း မြေကြီးပေါ်မှာခွေးခြေပုလေးတွေနှင့်ထိုင်
စားရသော ၃၄လမ်းမုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ထက်တော့ အပုံကြီးကောင်းသောစားသောက်ဆိုင်မှာစားသောက်နေကြ ရင်း ' ကိုရဲ.. ၃၄လမ်းဆိုင်မှာ မို့ကိုမုန့်ဟင်းခါးလိုက်ကြွေးတာမှတ်မိလား' ဟုကျမကမေးတော့ သူကမရယ်မပြုံး နှင့်ပြန်ဖြေသည်။
“ မှတ်မိပါ့ဗျာ..။ တွေးလိုက်တာနဲ့စပ်ပြီးချွေးတွေပြန်လာတယ်။“
အအေးခွက်နှင့်နှုတ်ခမ်းခြင်းလာထိသည်။ သူ့ဇနီးကသူအလစ်မှာကျမဖက်လှည့်၍သူ့အားမေးငေါ့ပြကာ'အစ်မ သူငယ်ချင်းကိုပြောပါဦး' ဆိုသောအဓိပ္ဗါယ်ကို အသံတိတ်သရုပ်ဆောင်ပြသည်။
တခါတရံ ကျမမြို့ထဲမှအပြန်ကားကိုသာကေတထိမစီးပဲ သူ့အိမ်ရှိရာသင်္ကန်းကျွန်းသို့စီးသွားလိုက်သည်။
သူ့အိမ်ကိုဝင်ကာစကားစမြည်ပြော၊ ထုံးစံအတိုင်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှင့်ကျမတဆိုင်ဆိုင်မှာ တခုခုသွားစားကြ၊
ပြီးလျှင်သူတို့ကကျမကိုတက္ကစီတစီးငှားပေးလိုက်သည်။ သူတို့အိမ်နားကစားသောက်ဆိုင်မှာသူ့ဇနီးမပါပဲထိုင် ကြသောတနေ့ သူကရွှေဝါရောင်ဝီစကီထဲရေခဲတုံးကလေးတွေထည့်မွှေနေစဉ် ကျမကပြောမိသည်။
သူကခေါင်းကိုမညိတ်တညိတ်အရင်လုပ်ပြ၏။ ပြီးတော့မှခပ်ဖြည်းဖြည်းပြောသည်။ သူ့မျက်နှာတွေက အနည်းငယ်ထူအမ်းနေပြီလေ။
“ ခင်ဗျားက ကျနော့်ကိုစေတနာနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့
သက်တမ်းအရရော၊ မိတ်ဆွေရင်းခြာလိုမောင်နှမလိုခင်မင်ခဲ့ကြတာရောနဲ့ ပြောပိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေ
မယ့် ကျနော်ကလျှော့ရင်သာလျှော့လို့ရမယ်၊ ဖြတ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျ။“
“ ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုရဲရယ်“
“ ကျနော်မှာမွေးရာပါနှလုံးရောဂါရှိတာမို့သိသားပဲ။ တနေ့လုံးသွားသွားလာလာနဲ့မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် နေနိုင်ပေမယ့် ညအိပ်ရာဝင်ပြီဆိုရင် ကျနော့်နှလုံးခုန်သံတွေကို ကျနော်ပြန်ကြားလာရော။ အဲဒီနှလုံးခုန်သံ
တွေကိုနားထောင်ရင်း ကျနော်အတွေးတွေကဟိုရောက်သည်ရောက်ရောက်ကုန်ရော။ကြာတော့မခံနိုင်တော့ ဘူးဗျာ။ အရက်သောက်လိုက်လို့မူးသွားရင်ကျနော်နည်းနည်းတည်ငြိမ်လာတယ်။ ဘာမှသိပ်မတွေးပဲအိပ်ပျော် သွားရော။ အဲဒီလိုနည်းနဲ့အိပ်ပျော်အောင်လုပ်ခဲ့ရင်း နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတော့ ကျနော့်သွေးက အရက် ကိုတောင်းဆိုနေပြီလေ။ မရတော့ဘူး..“
အိပ်မပျော်သောညပေါင်းများစွာက သူ့ကိုဘယ်လောက်တောင်ခြောက်ခြားစေခဲ့သလဲကျမလည်းမခန့် မှန်းနိုင်တာကြောင့် သူ့ကိုဆက်ပြီးတရားမဟောချင်တော့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်၏အရှိတရားနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူက
“ မို့တို့အခုနေတဲ့လမ်းထဲကကောင်လေးတယောက်က တနေ့လမ်းမှာဆုံတော့ရပ်ပြီးမေးတယ်။“
“ ကျနော်က နီကိုရဲပရိသတ်ပါတဲ့။ အစ်မနဲ့ နီကိုရဲတော်တော်ခင်သလားတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူကသူ့ဝတ္တုတွေထဲမှာ အစ်မနံမည်တွေ ခဏခဏထည့်ရေးတယ်လေ။ အစ်မမသိဘူးလားတဲ့“
“ အမှန်အတိုင်းေုပြာရရင် ကိုရဲဝတ္တုတွေ အကုန်လုံးမဖတ်ဖြစ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် မို့သံလျှင်မှာနေတဲ့ကာ
“ ဒီလိုပါပဲဗျာ။ ကျနော်စာရေးရင်းခင်ဗျားကိုသတိရလာရင် ကြုံတဲ့နေရာခင်ဗျားနံမည်ထည့်ရေးလိုက် တာပါပဲ။ တခါတလေလည်းနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ပေါ့။ တခါတလေလည်းလွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးပေါ့။“
“ နံမည်ကျော်စာရေးဆရာကြီးက သူ့ဝတ္တုထဲမှာမို့နံမည်ထည့်ရေးတာဆိုတော့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။“
ပထမတော့ သူကတဟားဟားရယ်သည်။ ပြီးမှအရယ်ကိုတိကနဲဖြတ်ပြီး' အဲ့ဒီလိုမပြောပါနဲ့၊ အဲဒီလို မပြောပါနဲ့' ဟုလက်ညှိုးထောင်၍ပြောပြန်သည်။
အဲသည်ညဦးက သူနှင့်ကျမစကားတွေအများကြီးနောက်ဆုံးပြောခဲ့ရသောညဖြစ်ပါသည်။ပြီးတော့ကျမ တို့၏ အပြောင်အပျက်အနည်းဆုံးစကားဝိုင်းလည်းဖြစ်၏။
သူ့ကိုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တာကတော့ တာရာမင်းဝေဈာပနမှာဖြစ်သည်။ အဲဒီဈာကနမှာ ကျမလည်း အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်နေခဲ့သည်။ ကိုရဲကိုလူအုပ်ထဲတွင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေသောမျက်နှာနှင့်လှမ်းတွေ့လိုက်
သည်။ သူကကျမကိုလှမ်းမြင်တော့ သူလုပ်နေကျအတိုင်း ဒန့်လွန်သီးနှင့်တူသောလက်ညှိုးကိုယမ်း၍ပြသည်။
သူ့ကိုကြည့်ရတာ ရေးဖော်သူငယ်ချင်းဆုံးရှုံးရသည့်အတွက် စိတ်မကောင်းတာအပြင်တခုခုကိုထိတ်လန့်နေ သလိုပဲဟု ကျမထင်ခဲ့မိသည်။ အဲဒီနေ့ကသူ့ကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သည့် နေ့မှန်းရိပ်စားမိလျှင်တော့ သူ့အနား
ရောက်အောင်သွားကာ သူ့ကိုပေါ့ပါးလာစေချင်သောစေတနာနှင့် အပြောင်အပျက်တခုခုပြောဖြစ်လိမ့်မည်
ထင်သည်။ သူ့ထံမှကြားရလေ့ရှိသည့် ' မို့နော် မို့။ ခင်ဗျားဗျာ' ဆိုသောအဆုံးအစမရှိစကားသံကိုလည်းနောက် ဆုံးအနေနှင့်ကြားခဲ့ရလိမ့်မည်ထင်သည်။
တဖက်ကပန်းခြံနှင့် တဖက်ကလမ်းမကျယ်မို့လားမသိ။ လေအဝေ့မှာ ကတ္တရာလမ်းကိုတရွတ်တိုက်၍ လွင့်လာသောရွက်ကြွေတွေက အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ပင်။ လေကကတ္တရာလမ်းကို အလျှားလိုက်ဖြတ်တိုက်တာ မို့ရွက်ကြွေတို့၏ခြေသံကလည်းရှည်ကြာသည်။ ဒီဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကလေးမှာ ကျမထိုင်နေမိတာဘယ်
လောက်ကြာသွားပြီလဲမသိပါ။ ရွက်ကြွေများကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သောအတိတ်ခရီးကို ရွက်ကြွေများကပင်
ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်းမသိမျက်ရည်ရစ်ဝဲ၍ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောာက်မှန်းမသိ မျက်ရည်ကြားမှရယ်
မောမိခဲ့သလဲ ကျမမမှတ်မိတော့ပါ။ ခုချိန်ထိတော့ ကိုရဲအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်လျှင် ကျမကအိပ်မက်ယောင် သူလိုဖြစ်နေတုန်းပင်။ သူမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံမိလိုက်၊ ဒီသတင်းစကားဟာ.. ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာအိပ်
မက်တခု၊ ၀တ္တုတပုဒ်ပါပဲဟုထင်မိလိုက်။ သူ့အကြောင်းရေးသည့်ကျမ၏ဒီစာစုကိုသူဖတ်မိလျှင် သူကတော့
သူသေဆုံးကြောင်းစကြားခဲ့ရသည့်ပထမဆုံးရက်မှာ ကျမအတွေးကိုသူစိုးမိုးထားပေမယ့် သူ့အကြောင်း
မရေးဘူးဟုကျမကိုယ်ကျမသတိပေးခဲ့သည်။သူနှင့်ကျမအလွန်နီးစပ်ခင်မင်ခဲ့ကြကြောင်းသူသေသွားမှရေးနေ လို့လည်းဘာထူးမှာလဲဟုကျမတွေးမိခဲ့သည်။ အဲဒီလိုနီးစပ်ခင်မင်မှုတွေက သူနှင့်အတူရှိနေခဲ့ချိန်များမှာသူ့
ကောင်းကျိုးအတွက် တခုခုလုပ်ပေးခဲ့ရမှာလေ။ ဒါပေမယ့်ကျမနှလုံးသားစေရာကို ကျမကိုယ်ကျမသတိပေးမှု များကမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပါ။ တိတ်ဆိတ်အေးစက်သောညလယ်မှာ သူ့အကြောင်းကျမရေးမိခဲ့ပြီ။ စာရေးနေရင်း အိမ်ရှေ့တံခါးဆီအာရုံရောက်သွားတာလည်းခဏခဏ။ဟိုတုန်းကလို ညကြီးသန်းကောင်အိမ်တံခါးလာခေါက် ပြီး' ခင်ဗျားကို ကျနော်တောင်းပန်ချင်လို့' ဟု မရယ်မပြုံးသောမျက်နှာနှင့်လာပြောဦးမည်ဟုထင်နေမိသည်။
ခြောက်မိုင်ခွဲမှ ကျမပြောင်းလာပြီး ၃၄လမ်းကျူရှင်ခန်းမှာပြန်မဆုံခင်ကာလတိုလေးတခုမှာ ကျမက လှည်းတန်းဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းကအပြင်ဆောင်တခုမှာနေသည်။ အဆောင်ကလမ်းမကျယ်ကြီးပေါ်မှာမဟုတ် ပဲလမ်းမမှခွဲထွက်သွားသောလမ်းသွယ်လေးပေါ်မှာရှိသည်။ထိုလမ်းသွယ်လေးကတဖက်ပိတ်လမ်းကလေးဖြစ် သည်။
ညနေနှောင်းပိုင်းတခုမှာ ကျမအခန်းရှိရာအိမ်အပေါ်ထပ်မှနေပြီး ကျမနံမည်ကိုအော်ခေါ်သံလိုလိုကြား မိ၍ အပေါ်ထပ်ပြတင်းပေါက်မှထွက်ကြည့်မိသည်။ နီကိုရဲကို ထုံးစံအတိုင်းဘုထုံးတခုပါသောလွယ်အိတ်ကို
စလွယ်သိုင်း၍လက်ဖုဝါးနှစ်ခုကို ပါးစပ်မှာကာပြီးကျမနံမည်ကိုအော်ခေါ်နေတာတွေ့ရသည်။ ကျမကမန်း
“ ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာကိုရဲရယ်။ ဘာလို့အဲဒီလိုလုပ်ရတာလဲ“
“ ခင်ဗျားဒီလမ်းထဲမှာနေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါပေမယ့်အိမ်နံပါတ်အတိအကျမသိဘူးလေ။ ဒါနဲ့ဒီလမ်း သွယ်ထဲစ၀င်ကတည်းက နံမည်အော်ခေါ်လာတာ။ ခင်ဗျားကြားရင်ဆင်းလာမှာပဲဆိုတာ ကျနော်သိတယ်။“
အဲဒီလိုနည်းနှင့်လည်း ကျမထံသူရောက်လာဖူးသည်။ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ ကျမရှိနေရာနေရာတိုင်းလိုလို ကို ပုံစံမျိုးစုံနှင့်သူရောက်လာခဲ့သည်။ ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်လက်စနှင့်ပင် ညနေနှောင်းချိန်ရောက်တိုင်း ကျမ အခုနေသည့် တလမ်းမောင်းလမ်းကလေးပေါ်မှနေ၍ ကိုရဲတယောက် ကျမနံမည်ကိုအကျယ်ကြီးအော်ခေါ်နေ လိမ့်မလားဟုတွေးမိသည်။ တကယ်လို့သူ့ခေါ်သံကို ကျမမကြားခဲ့ဖူးဆိုလျှင် သူ့ခေါ်သံက ရွက်ကြွေများနှင့် ကတ္တရာလမ်းတို့ပွတ်တိုက်သံတွေကြားမှာ ရောနှောသွားတာပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။